दुइटा लोकस्मृति - HongKong Khabar
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २५, २०७७ समय: ९:१८:५२
“मारी काइको छिन–छिन ऐइडीका टोल
भदौ १५ गते लौडी पाइत साप्यो
साङी पाइत साप्यो
ऐइडी गादो पाड्यो
मार्काइ घाँणो लायो”
भदौ पन्ध्र गते नदीको खुट्टा भाँचिएर अब नउर्लने भएको थियो । बिस्तारै–बिस्तारै नदीको बहाव पनि घट्दै थियो । वनजंगल डाँडा काँडा सुख्खा हुन थाल्यो । शिकारीलाई शिकार खेल्ने सही समय आयो । शिकारी बिहानै नजिकैको वनमा गई रुइसको काँचो लौरौ काटेर आगोमा बेस्सरी पिरोल्यो र दरो लौरी बनायो । त्यसपछि त्यसमा साङो हाल्यो र आगोमा तताई बेस्सरी तिखो बनायो । शिकार खेल्न जाँदा पहाड हिमाल छिचोल्नु पथ्र्याे । जाडो धेरै हुन्थ्यो । त्यसैले उनको आमाले गादो तयार पारिदियो । त्यसपछि मार्कु कुकुरलाई घाँणो लगाएर अर्काे दिन शिकारको खोजीमा निस्क्यो ।
“झान मारीका खान तितरीको खोज
तितरीको खोज खेत हरायो ।
झान मारीका खान कुखुराइको खोज
कुखुराइको खोज खेत हरायो ।
झान मारीका खान काँकडैका खोज
काँकडैका खोज तिउडा हरायो ।
घोडरैका खोज चाँच हरायो ।
थारैका खोज डौणी हरायो ।
सुगरैका खोज बैलड्यान हरायो ।”
मार्कु कुकुरलाई तितरीको पछाडि लगायो । तितरीको खोज खेतमा हरायो । काँकडको खोज तिउडा हरायो । घोडरको चाँच, थारको डौँणी र सुंगुरको खोज बैतड्यान हरायो ।
यसरी दिनभरि डुल्दा पनि एउटा शिकार पनि हात नपरेकोले शिकारी निरास भयो । घरबाट पोको पारी ल्याएको सातु सामल खायो । त्यसपछि मार्कु कुकुर अगाडि आफू पछाडि–पछाडि ‘राउलेको’ (झालर) खोजमा निस्क्यो । हिँड्दा–हिँड्दा राउलेको स्वास्नी पानी खान नवाली (मुल) मा आएको थियो । दुवैको जम्काभेट भयो । यस्तो शिकारीले साङी हान्नै लागेको थियो । राउलेको स्वास्नीले भन्योः
“पुग्यो मारीका खान नालीको पानी
राउलेको स्वास्नी नवालीको पानी
मै जन मारै ऐडीया चेला (शिकारी)
झान मारीकाको खान, शिखरै पो झान
ठुलो ठामरो छ मेरो राउले गाणो
रूपसे ठुमरे छ मेरो राउले गाणो
शिखरै पो रन्छ, बुक्यालु चरन्छ ।”
हेर (ऐडीया) शिकारी चेला, मलाई मारेर तिमीहरूलाई कुनै फाइदा छैन । म त एकदम दुब्लो छु । पातलो छु । मेरो शरीरमा हड्डी–हड्डी बाहेक अरू केही छैन । बरु मलाई मार्नुभन्दा मेरो लोग्नेलाई मार । ऊ म भन्दा धेरै मोटो छ । मभन्दा राम्रो छ । शिखरमा गएर बुक्याल चर्छ । शिखरै बस्छ । एकदम बलियो छ । राउलेको स्वास्नीको यस्तो कुरा सुनेपछि ऐडीमा चेला राउलेको खोजीमा शिखरतिर हिँड्छन् ।
त्यसै बेला अर्थात् शिकारीहरू आएको एक दिन अघि राउेलेको आमालाई सपना भएछ । सपनामा राउले रगतै रगतले पोतिएको हुन्छ । राउलेको जाबरमा साङ्की गाभिएको हुन्छ । यस्तो सपना देखेपछि राउलेको आमाले भन्छः
“राउलीको जिया सपनु भैछ ,
राउलेको रन ठौर रकतको कुन्न ।
राउलेको जागर साङी झलके ।
आजको दिन घरै बसीयान ।”
त्यसैले आज छोरा त घरै बस । शिखरतिर चर्न नजा । तर राउलले आमाको भनेको कुरा टेर्दैन । अनि बिहानै शिखरतिर चर्न जान्छ । त्यसै बेला ऐडीया अर्थात् शिकारीहरू मार्नु कुकुरको घाणोको छिन–छिन–छिन आवाज सँगै शिखरमा पुुग्छन् । राउलेलाई साङी हानी मारिदिन्छन् । छोरा मारेको खबर राउलेको आमाले सुन्छ । धुरुधुरु रुन्छ । अनि शिकारीहरूलाई केही कुरा भन्छः
“नित्तै मेर राउले आफ्नू ठौर
आज मेर राउले बाउरंगे पाँण
शिखरैपो रन्थ्यो, बुक्यालु चरन्थ्यो
ओत न ओलानुले सुदै मारी दियो ।
घोडर, काँकडले त सोरु खाइको नाँस
मेर राउले पातलैको टुसा खान्थ्यो
ओत न ओलानुले खसदै भारी दियो ।”
राउलेको आमाले— ‘‘मेरा छोरा राउले सधैँ आफ्नो घरमा रहन्थ्यो । शिखरमा गएर चथ्र्याे । बुक्यालको बाक्लो घाँस खान्थ्यो । न कसैको विकान गथ्र्याे । न कसैको बारी खान्थ्यो । विनासिती तिमी ऐइडीयाहरूले मेरो छोरालाई मारिदियौ । तिमीहरू पापी हौ । घोडर, काँकडले त तिमीहरूको खेतो पातो (सोरु) बारी खान्थ्यो । तिनीहरूलाई मार्नु नि ! आज तिमीहरूले बिनालित्ती मेरी छोरा मारेर त्यसको मासु खाँदै छौ । तिमीहरू पापी हौ’’ यसो भनिदिइन् ।
कथार्थ ः आमा सबैभन्दा माथि हुन्छ । उसले आफ्नो सन्तानको कहिले पनि कुभलो चिताउँदैन । त्यसैले आमाको कुरालाई कहिले पनि नटेर्नु हुँदैन । अथवा आमाको कुरा काटेर कहिले पनि आफ्नो खुसी गर्नु हुँदैन । यदि राउलेले आमाको भनेको कुरा मानेको भए शिकारीको फन्दामा पर्दैनथ्यो, मर्दैनथ्यो तर उसले आमाको कुरा नमानेर ज्यान गुमाउनु प¥यो ।
२. कैलाबिर र झलुवाबिर
दार्चुलाको अपि हिमाल फेदीतिर लोकप्रचलित कथा ।
उहिलेको समयमा कुनै एउटा ओडारमा दाडेबिर (सुंगुर) दम्पति बस्थे । उनीहरुको बिचमा असाध्यै प्रेम थियो । दुवै हाँसीखुसी जीवन गुजारा गरिरहेका थिए ।
एक दिन दाडेबिरकी स्वानी गर्भवती भइन् । त्यसैले बइक (लोग्ने) आप्mनो स्वानी (स्वास्नी) को लागि मिठो मसिनो खानेकुरा खोज्न जङ्गलतिर लागे । साँझ अलिकति खानेकुरा बोकेर घरतिर फर्किन लागेको थियो । त्यसै बेला सिकारको खोजीमा भौतारिँदै गरेको झलुवाबिर (बाघ) सँग उसको जम्काभेट भयो । लगत्तै दुवैको बिचमा घमसान युद्ध भयो । झलुवाबिरले दाडेबिरलाई मारिहाल्यो ।
उता दाडेबिरकी स्वानी आफ्नो बइकको बाटो कुरिबसेकी थिइन् । राती अबेरसम्म पनि नफर्केपछि स्वानी बइकको खोजीमा निस्किइन् । अलि पर पुगेपछि उसले आफ्नो बइकको मृत्यु भएको सुइँको पाइन् र ह्वोक (शोक) मा डुब्दै घर फर्किन् ।
एक दिन दाडेबिरकी स्वानीले एक चेलो (छोरो) र छ वटी टचेली (छोरी) लाई जन्म दिइन् । र आफ्नो एक थुनमा एक्लो चेलोलाई र बाँकी थुनको दूध चाहिँ छ वटी चेलीलाई पिलाउन थालिन् । यसरी एउटा थुनको दूध एक्लै खान पाएपछि त्यो चेलो एक दिनमा दोब्बरले हुर्कन लाग्यो । पाँच महिना पालेपछि दस महिनाको हुन लाग्यो । हुँदाहुँदा दस वर्ष दूध खुवाएपछि बीस वर्ष जत्तिको पो देखिन थाल्यो । एकदमै तागतिलो र साहसिलो भएपछि आमाले त्यसको नाम कैलाबिर राखीदिइन् ।
एक दिन घरमै भएको बेला कैलाबिरले आमालाई सोध्यो ः आमा, सबैका बुवाहरु छन्, तर मेरो बुवा चाहिँ खोइ ? मेरो बुवा को हो र कहाँ छन् ?
कैलाबिरको कुरा सुनेपछि आमाले भनिन् ः चेला, तेरो बाबा नै छैन ! तँ त आकाशबाट झरेको र जङ्गलबाट पलाएको थिस् ।
आमाको यस्तो कुरा सुनेपछि कैलाबिरलाई अचम्म लाग्यो । उसलाई आमाको कुरामा पत्यार लाग्न मुस्किल प¥यो । फेरि आमालाई सोध्यो ः यो कसरी सम्भव छ कि म आकाशबाट झरेको र जङ्गलबाट पलाएको ? यो कदापि सम्भव छैन !
बारम्बार कैलाबिरले आमालाई आफ्नो बाउको बारेमा सोधेपछि आमाले भनिन् ः सबै भन्दा पहिला म तेरो परीक्षा लिन्छु । यदि तँ परीक्षामा सफल भइस् भने म तँलाई तेरो बुवा कहाँ छ भन्नेछु, हैन भने भन्दिनँ ।
आमाको अह्राई कैलाबिरले ‘हुन्छ’ भन्यो ।
कैलाबिरको दुस्साहस देखेपछि आमाले भनिन् ः सबै भन्दा पहिला सल्लेरी पाखामा गएर सल्लाको खोटो शरीरभरि दलेस् । गाड (नदी) मा गएर ज्यानमा बालुवा दलेस् । त्यसपछि निगालो घारिमा गएर निगालो काटी शरीरभरि रोपेस् । अन्तमा आकाशको पानी तेरो शरीरमाथि पाँच थोपा पानी बर्सनु भन्दा पहिले बाइस जोडा देउलो (निगालो) काटेर बस्ने घर बनाई सक्नुपर्छ । त्यति गरिसकेपछि मात्र तेरो बुवाको बारे बताउनेछु ।
भोलिपल्ट आमाले लिएका सबै परीक्षामा कैलाबिर सफल भयो ।
चेलाको यस्तो बहादुरी देखिसकेपछि आमा गदगद भइन् र भनिन् ः तेरो बुवा त गैला पातल (घना जंगल) झलुवाबिरैले खाएको थियो ।
आमाको मुखबाट यस्तो कुरा सुनेपछि कैलाबिर झलुवाको खोजीमा निस्क्यो । केही पर पुगेपछि उसको भेट झलुवाबिरसित भयो । देख्ने बित्तिकै कैलाबिरले झलुवाबिरलाई युद्धको निम्तो दियो । झलुवाबिर तत्काल युद्ध स्विकार ग¥यो । कैलाबिरले पहिलो प्रहार झलुवाबिरलाई गर्न लगायो । तर झलुवाविरले इन्कार्दै ऊ बालक भएकोले पहिलो प्रहार कैलाबिरलाई नै गर्न लगाए । झलुवाबिरको कुरा सुन्ने बित्तिकै कैलाबिरले पहिलो प्रहार गरिदियो । पहिलो प्रहारमै झुलुवाको खुट्टा काटिदियो । दोस्रो प्रहारले उसको घँुडा काटिदियो । तेस्रो प्रहारले कम्बर र चौंथो प्रहारले घाँटी नै छिनाइदियो । अन्तिम प्रहारले आफ्नो बाबाको प्रतिशोध पूरा गरिछाड्यो ।
कथार्थ ः सुंगुरको ‘बाद’ (छाला) बाक्लो हुनु र छालामा सधैँ बालुवा टाँसिनुको कारण कैलाबिरको आमाले लिएको परीक्षाको फल हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । अर्को कुरा सुंगुर जुन बाटो आउँछ, त्यही बाटो फर्किन्छ । त्यसैले सुंगुर हिँडेको बाटोमा कदापि पर्नु हुँदैन भनिन्छ । यदि परिहाल्यो भने जसरी बाघलाइ छेदेको थियो, त्यस्तै छेदन गर्छ भन्ने जनविश्वास अपि फेदीका बस्तीहरुमा यद्यपि पाइन्छ ।
—हिमालीको ‘आम्मा’ कवितासंग्रह छापिसकेको छ । उनी कीर्तिपुरस्थित त्रिविमा समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत् छन् ।